ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် နာကျင်ပြီး ငိုချင်ငိုနေတတ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့ – Shinyoon
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် နာကျင်ပြီး ငိုချင်ငိုနေတတ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့
ကျွန်မက. . . အေးအေးဆေးဆေးလေး နေရတာကို သဘောကျတယ် ပြီးရင် ကိုယ့်အနားမှာ ရှိတဲ့သူတိုင်းကို တွယ်တာတတ်တယ် ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် နာကျင်ပြီး ငိုချင်ငိုနေတတ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။
တစ်ဖက်လူက သူ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြရင် ကျွန်မက စိတ်လိုလက်ရပဲ ကိုယ့်အနာတွေလိုမြင်ပြီး ချက်ချင်းတွေ နာကျင်ပစ်လိုက်တတ်တာလေ ။ ဒါတွေကြောင့် ရင်ဘတ်ထဲမှာ အနာတရတွေများတယ် သူ့ကြောင့် နာကျင်ရတယ်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မနေတတ်ခဲ့လို့ပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခက်ခဲတတ်တာပါ ။
ကျွန်မ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာတဲ့အခါ . . .အရမ်းကို ချစ်တတ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ချစ်ကြောင်းတွေ မပြတတ်ခဲ့ဘူး ရင်ထဲမှာ သေလောက်အောင်လွမ်းနေပေမယ့် မျက်လုံးမှာ အရမ်းတွေ တည်ငြိမ်နေပြီး စကားလုံးတွေက ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ထွက်မလာတတ်ဘူးလေ ။
ညုတုတု ချိုချိုပြစ်ပြစ်တွေ မသုံးတတ်ဘူး ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် အဲ့လို စကားလုံးတွေကို ဆို အရမ်းမုန်းတတ်တာမျိုးလေ ။ ဒါကြောင့် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်မက ကံမကောင်းတာများတယ် မင်းက နားလည်ရခက်လိုက်တာဆိုပြီး ကျန်ခဲ့ရတာများတယ်လေ
ကျွန်မက . . သိမ်ငယ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူး ။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ ငါ့အနား ဘယ်သူမှ မရှိပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အားငယ်နေတတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက် ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြန်ပြီး မာန်တင်းပြီး သန်မာချင်ယောင်ဆောင်ရတာပါပဲ ။ ကျွန်မက လူတစ်မျိုးကို ကိုယ့်ကို သနားပါတယ်ဆိုရင် အဲ့လူကို သဘောမကျတော့ဘူး ။ ကျွန်မလဲ လူလေ အသနားခံ သတ္တဝါတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မှာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိလာသည့်တိုင် တစ်နေ့တော့ အဆင်ပြေလာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရုန်းကန်နေရတုန်းပါပဲ ။
အားနည်းချက်တွေလဲ အများကြီးရှိတယ် ကိုယ့်အနားလာရပ်တာနဲ့ လွယ်လွယ်လေး တွယ်တာပစ်လိုက်ပဲ ပြီးရင် ယုံကြည်ပစ်လိုက်တာလေ ။ ပြီးရင် တစ်ခုခုဆို အဆုံးစွန်ထိတွေးပြီး အဆုံးစွန်ထိတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နာကျင်ပစ်လိုက်တာလဲ အရမ်းကို ဆိုးတယ် ဒီအကျင့်တွေ ဒီအတွေးတွေ ပြင်ဖို့တွေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ ပြင်ဖို့မစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့်နောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ ဆင်ခြင်ပြီးနေပါမယ်
ဒါကတော့ ကျွန်မ အကြောင်းတစ်ပိုင်းတစ်စလေးပါ ။
ကြၽန္မက. . . ေအးေအးေဆးေဆးေလး ေနရတာကို သေဘာက်တယ္ ၿပီးရင္ ကိုယ့္အနားမွာ ရွိတဲ့သူတိုင္းကို တြယ္တာတတ္တယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ နာက်င္ၿပီး ငိုခ်င္ငိုေနတတ္တဲ့ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေပါ့ ။
တစ္ဖက္လူက သူ႔ဒဏ္ရာေတြကိုျပရင္ ကြၽန္မက စိတ္လိုလက္ရပဲ ကိုယ့္အနာေတြလိုျမင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေတြ နာက်င္ပစ္လိုက္တတ္တာေလ ။ ဒါေတြေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ထဲမွာ အနာတရေတြမ်ားတယ္ သူ႔ေၾကာင့္ နာက်င္ရတယ္လို႔ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မေနတတ္ခဲ့လို႔ပဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ခက္ခဲတတ္တာပါ ။
ကြၽန္မ အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္လာတဲ့အခါ . . .အရမ္းကို ခ်စ္တတ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္ေၾကာင္းေတြ မျပတတ္ခဲ့ဘူး ရင္ထဲမွာ ေသေလာက္ေအာင္လြမ္းေနေပမယ့္ မ်က္လုံးမွာ အရမ္းေတြ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး စကားလုံးေတြက ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ ရွိတဲ့အတိုင္း ထြက္မလာတတ္ဘူးေလ ။ ညဳတုတု ခ်ိဳခ်ိဳျပစ္ျပစ္ေတြ မသုံးတတ္ဘူး ကြၽန္မ ကိုယ္တိုင္ အဲ့လို စကားလုံးေတြကို ဆို အရမ္းမုန္းတတ္တာမ်ိဳးေလ ။ ဒါေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ကြၽန္မက ကံမေကာင္းတာမ်ားတယ္ မင္းက နားလည္ရခက္လိုက္တာဆိုၿပီး က်န္ခဲ့ရတာမ်ားတယ္ေလ
ကြၽန္မက . . သိမ္ငယ္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ ငါ့အနား ဘယ္သူမွ မရွိပါလားဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အားငယ္ေနတတ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ငါ့အတြက္ ငါရွိတယ္ဆိုတဲ့ျပန္ၿပီး မာန္တင္းၿပီး သန္မာခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရတာပါပဲ ။ ကြၽန္မက လူတစ္မ်ိဳးကို ကိုယ့္ကို သနားပါတယ္ဆိုရင္ အဲ့လူကို သေဘာမက်ေတာ့ဘူး ။ ကြၽန္မလဲ လူေလ အသနားခံ သတၱဝါတစ္ေကာင္မဟုတ္ဘူး ကိုယ့္မွာ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိလာသည့္တိုင္ တစ္ေန႔ေတာ့ အဆင္ေျပလာမွာပါဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနရတုန္းပါပဲ ။
အားနည္းခ်က္ေတြလဲ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ကိုယ့္အနားလာရပ္တာနဲ႔ လြယ္လြယ္ေလး တြယ္တာပစ္လိုက္ပဲ ၿပီးရင္ ယုံၾကည္ပစ္လိုက္တာေလ ။ ၿပီးရင္ တစ္ခုခုဆို အဆုံးစြန္ထိေတြးၿပီး အဆုံးစြန္ထိေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နာက်င္ပစ္လိုက္တာလဲ အရမ္းကို ဆိုးတယ္ ဒီအက်င့္ေတြ ဒီအေတြးေတြ ျပင္ဖို႔ေတြးပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိေတာ့ ျပင္ဖို႔မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ဘူး ဒါေပမယ့္ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္မ ဆင္ျခင္ၿပီးေနပါမယ္
ဒါကေတာ့ ကြၽန္မ အေၾကာင္းတစ္ပိုင္းတစ္စေလးပါ ။
မိန်းမတိုင်းလိုချင်တဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ . . .